हामीले यस कारणले गर्यौ तीन बुँद सम्झौता | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » हामीले यस कारणले गर्यौ तीन बुँद सम्झौता
हामीले यस कारणले गर्यौ तीन बुँद सम्झौता
saharatimes Friday, August 19, 20160No comments
हामीले तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरुवात गर्दा कुनै लिखित माग लिएर अगाडि बढेका थिएनौ । त्यसबेला हाम्रो माग थियो कि अन्तरिम सविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार माग सम्बोधन होस् । तर अन्तरिम सविधानको पनि उलघंन भयो । विगतमा भएको सम्झौताहरुका धेरै जसो विषय अन्तरिम सविधानमा उल्लेख थियो । अन्तरिम सविधानमा रहेको सम्झौताका कुराहरुलाई अगामी सविधानसभामा एड्रेस गर्ने कुरा थियो । पहिलो सविधानले गरेको कामलाई स्वामित्व लिने कुरा थियो तर सविधान निर्माण हुँदा धेरै कुराको उलट पुलट गर्यो ।
पहिलो सविधानसभामा भएका सहमतिलाई कुनै पनि रुपमा फेरबदल गर्नुहुँदैन भनि हामी बीच र दलहरुको बीचमा सहमति थियो तर ती सबैलाई उल्टाउने काम भयो ।
विवादका जुन चार विषय थियो त्यसमा पनि लगभग सबै विषयमा सहमति भइसकेको थियो तर लिखित हुन बाँकी थियो । नागरिकता, संघीयता, समावेशी समानुपातिक र जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायतका विषयमा सहमति भइसकेको थियो तर सविधानसभाका समितिहरुमा हाम्रो बहुमत नपुगेकाले त्यसलाई लिखित रुपमा राख्न सकिएन । यी विषयहरु प्रवेश हुँदा अन्य दलका नेताहरु बैठकमै आउँदैन्थयो र कोरम नपुगेका कारण बैठक स्थगित हुन्थ्यो ।
सविधान संशोधनका लागि एउटा धारालाई परिवर्तन गर्यो भने त्यससँग सम्बन्धित अन्य धारा, उपधाराहरु पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने हुन्छ ।
ती चारवटा मागसँग सम्बन्धित विभिन्न ३२ बुँदे माग तयार भयो । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई सविधानसभाद्धारा नयाँ सविधानमा समावेश गराउने अन्तरिम सविधानमा उल्लेख थियो । तर त्यस्तो गरिएन । हामीले कुनै नयाँ माग राखेका होइनौं । जो अधिकार हामीलाई दिइसकेको थियो त्यही कार्यान्वयन गर्न हामीले भनिरहेका थियौं । त्यसलाई संस्थागत गर्न भनिरहेका थियौं । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला हामी १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । त्यसबेला माआवादी पनि हाम्रो साथमा थियो ।
सुशिल कोइरालसँग कुरा
तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.सुशिल कोइराला हाम्रो पार्टी कार्यालयमा एक दिन आउनु भएको थियो । आएपछि उहाँले मसँग छुट्टै कुरा गर्न चाहनु भयो । र, हामी दुईजना एक्लै बस्यौं । उहाँले मलाई सिधै प्रश्न गर्नुभयो कि तपाईहरुको माग के हो ? म अच्चममा परे । आश्चर्यचकित हुँदै मैले भने, अहिलेसम्म हाम्रो मागको बारेमा तपाईलाई थाह छैन ? अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई केही पनि थाह छैन ।’ मैले भने, हाम्रो त कुनै पनि माग नयाँ छैन, पुरानै मागहरु छन् जो विगतमा सम्झौता भएर हस्ताक्षर पनि भएका छन् ।
तैपनि तपाईलाई थाह छैन भने जानकारीका लागि मागको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराउन सकिन्छ ।’ मैले भने, पहिलो काम वार्ताका लागि सहज वतावरण बनाउनु होस् । आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउनु होस्, जसले गर्दा जनतामा रहेको भय र त्रास कम हुन्छ । आन्दोलनका क्रममा समातिएकालाई छाड्नु होस् । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उपचार गर्नुहोस् । यसअघिका आन्दोलनमा घाइते भएका सबैको उपचार सरकारले नै गथ्र्यो । अस्पतालमा भर्ना हुने वित्तिकै सरकारको तर्फबाट उपचार शुरु हुन्थ्यो तर यसपटक त इन्ट्री तथा रजिस्ट्री पनि हामीलाई नै तिर्नु पर्यो ।
अप्रेशन गर्दा जबसम्म पैसा जम्मा हुँदैन्थ्यो तबसम्म अप्रेशनको औजार झिकिदैन्थ्यो जब कि यसअघिको आन्दोलनको बेला यस्तो भएका थिएन । तर हामीले ती सबै व्यहोर्नु पर्यो । प्राइभेटमा त त्यस्तो भए होला तर तपाईको सरकारी अस्पतालमा पनि यस्तो भेदभाव भयो ।’ यी सबै कुराको जानाकरी गराएपछि सुशिल कोइरालाजी विरामीलाई हेर्न वीर अस्पताल पुग्नु भएको थियो तर कुरा अगाडि बढेन ।
अहिले कानुन उल्झन पनि त्यस्तै भएको छ । कुनै मान्छे सानोतिनो मुद्दामा समातिए पनि छाड्नका लागि दुई लाख, तीन लाख धरौटी मागेको हुन्छ । कुनै नेताहरु थुनामा छन् भने त्यसलाई त केही समयका लागि नछोडाएपनि हुन्छ तर थुनामा रहेका युवा विद्यार्थी, महिलालाई त छोडाउनै पर्छ । महिलाहरु पनि थुनामा छन् उनीहरु पनि छोडाउन सकिएको छैन । छोडाउनका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्दा त्यतिबेला त हामीले हाम्रो महाधिवेशन छ महाधिवेशनपछि केही गरौंला भनि बहाना गर्थे तर अब त्यो बहाना पनि छैन । प्रहरीहरु अहिले पनि गाउँमा मान्छे धडपकड गर्न जान्छ । अहिले पनि मधेशी जनतामा भय त्रास कायमै छ ।
यी सबै कुराहरु मैले आफैले सुशिल कोइरालाजीलाई जानकारी गराएको हुँ । समाधानका लागि उहाँले प्रयास गर्दै गर्दा फेरिनु भयो । हुन त उहाँकै पालामा नै सबभन्दा बढी आन्दोलनकारीको हत्या भयो । हत्या हिंसा रोक्न भन्दा सुशिलजीले मलाई भन्नुभयो, मैले वामदेव गौतमलाई मधेशमा भइरहेको हत्या हिंसा रोक्नु भने अनि उनले मलाई भने, बरु गृहमन्त्रालय तपाई नै चलाउनुस् । म चलाउछु भने मलाई मेरो तरिकाले चलाउन दिनुस् ।’ यस्तो निरिहता प्रकट गर्नुभएको थियो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गालीका जति पनि टाइटल हुन्छ, ती सबै प्रयोग गरेर मधेशीलाई गाली गर्नुभयो, होच्याउनु भयो । मधेशको समस्या समाधान गर्नुभन्दा बढी मधेशलाई चिढाउने काम उहाँले गर्नुभयो । तर ओलीसँग नै सबभन्दा बढी मेरो कुराकानी भयो । हामी घण्टौ कुरा गथ्र्यौ तर अन्त्यमा कुनै निष्कर्ष निस्किदैन्थ्यो । उहाँसँग कुरा हुँदा उहाँले आफू जेल गएको कुरा घण्टौ सुनाउनु हुन्थ्यो, खेतमा हलो जोतेको कुरा घण्टौ सुनाउनु हुन्थ्यो । राजनीतिक कुरा गरौन त भन्दा उहाँले हुन्छ हुन्छ, राजनीतिक कुरा पनि गरौला भन्नुहुन्थ्यो । त्यतिबेला सम्ममा एक दुई घण्टा समय वित्थ्यो । अरु मान्छे भेटन आएपछि उहाँले लौ अब अर्को दिन हामी बसेर कुरा गरौला भनि मलाई विदाई गर्नुहुन्थ्यो ।
कहिले पनि सिरयसली कुराकानी हामीसँग भएन । कहिले काही कुरा हुँदा आयोग बनाउँछु, कार्यदल बनाउँछु, समिति बनाउँछु भनि कुरा टार्नु हुन्थ्यो । तर उहाँले समिति बनाउँदा न त्यसमा आफ्नो दलको मान्छे राख्नु हुन्थ्यो न काँग्रेसका मान्छे राख्नु हुन्थ्यो ।
कमल थापाको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति बनाउनु हुन्थ्यो । जे जस्तो भएपनि हामी कमल थापासँग पनि कुरा गर्न तयार हुन्थ्यौं । कुराकानी गर्दै जाँदा कुनै विषय आउँदा कमल थापाले भन्नुहुन्थ्यो एकपटक ओली जीसँग कुरा गर्नुपर्छ कि भन्दै बैठक स्थगित गर्नुहुन्थ्यो । जहिले यस्तै नै गर्नुभयो । वार्तालाई कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्न दिनुभएन । पछि थाह भयो, हामीलाई काठमाडौमा इगेंज गर्ने रणनीति थियो उहाँहरुको ।
यति हुँदा हुँदै पनि हामी वार्ताका लागि सधै तयार थियौं । वार्ताको विरोधमा हामी कहिल्यै गएनौ । हामीलाई आफ्नै पार्टीबाट तथा मधेशका जिल्लाहरुबाट दवाव आउँथ्यो कि तपाईहरु वार्ता गरेर समास्या समाधान गर्नुस् तर हामी वार्तामा बस्न जाँदा हामीलाई यसरी अल्झाई दिन्थ्यो । यहाँसम्म कि मधेशमा समस्या छ भने कुरा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वीकार गर्ने पक्षमै थिएन । सविधान पनि कुनै त्रुटी छैन । उत्कृष्ट सविधान हो भने हामीलाई उल्टै सविधान पढ्न सल्लाह दिनुहुन्थ्यो ।
यस अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको कुरा आएपछि ओलीको सरकार ढाल्न हामी तयार भयौं । माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले कमसे कम यति मान्न त तयार भयो कि मधेशमा समस्या छ, सविधानमा त्रुटी छ, मधेशी, आदिवासी जनजातिका लागि समस्या छ । यति कुरा कमसे कम प्रचण्डजी र देउवाजी स्वीकार गर्न त तयार भए । त्यसैले एक मौका दिनुपर्छ भनि हामी निष्कर्षमा पुग्यौ र तीन बुँदे सम्झौता गर्यौं । संसदीय राजनीतिमा छौ भने कही नकही त बस्नुपर्छ ।
कि हामीलाई सधै अपमान गर्ने एमालेको पछाडि बस्नुपर्यो या कि मधेशको मागप्रति सकारात्मक हुने काँग्रेस र माओवादीसँग बस्नु पर्यो, यी दुई अप्सनमध्ये जो हाम्रो माग सुनेको छ । मधेशमा समस्या छ भनि स्वीकार गरेको छ त्यस्तोको पक्षमा बस्नु पर्छ र हामीले काँग्रेस र माओवादीलाई रोजेका हौं ।
मधेशका सम्पूर्ण मागको बारेमा लिखित रुपमा पटक पटक जानकारी गराई सकेको छौ । कहिले १० बुँदे त कहिले ११ बुँदे त कहिले २६ बुँदे गरि सरकार पक्षलाई पटक पटक जानकारी गराएको कारणले संक्षेप्तमा तीन बुँदे सम्झौता गरेका हौं । मधेशी, आदिवासी जनजातिले उठाएका मागहरुको दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमतिका आधारमा सविधान संशोधन गर्ने कुरा एक नम्बरकै बुँदामा उल्लेख छ । त्यो भनेको विगतमा मधेशी र आदीवासी जनजातिहरुले उठाएका सबै मागहरुलाई सरकारले स्वीकार गरेको कारण सम्झौतापत्रमा ती सबै माग उल्लेख गर्ने आवश्यक थिएन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भए लगतै बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मधेशी दलले राखेको माग पुरा गर्ने बाटो खोलेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन तथा मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर मागहरुको बारेमा सल्लाह गर्नुभएको थियो त्यो एकदमै सकारात्मक हो ।
तीन बुँदे सम्झौतामध्ये हामीले तीन नम्बरको सम्झौता कार्यान्वयन गर्यौं अब एक र दुई नम्बर कार्यान्वयन गराउने काम सरकार पक्षको हो । सरकारले दुई नम्बर बुँदमा प्रवेश गरेको छ । सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार, बन्दी रिहाय, मुद्दा फिर्ता लगायतका काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यो काम कहिलेसम्म हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
(तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरले तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टको कार्यक्रममा व्यक्त गरेका सम्पादित अंश)